कसरी गर्न सकिन्छ काउली खेती ?
विधि, प्रकृया र जानकारी सहित
व्याड राख्ने जग्गालाई कम्तीमा ३÷४ पटक सम्म खनजोत गरी राम्रो जग्गा, खुकुलो, मल भएको, पानी नजम्ने, घाम लाग्ने, दोमट खालको माटो छानी माटोको उपचार फर्मालीन, मालाथियन, बेभिष्टिन जस्ता औषधिले गरी व्याडको तयारी गर्नु पर्दछ । व्याडको चौडाई १ मीटर र व्याडको उचाई १५ से.मी. उठेको बनाउनु पर्दछ । लम्बाई भने आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउन सकिन्छ । दुइटा व्याडको बीचमा ३० –४० सेमी चौडा कुलेसो बनाउनु पर्दछ ।
काउली क्रूसिफेरी परिवारमा पर्ने एउटा तरकारी बाली हो।
यसको प्रमूख वानस्पतीक जात ब्रासीका ओलेरेसीया बोट्राईटीजलाई खेती योग्य मानिएकोछ।
काउलीको बनस्पतिक बृद्धि हनु ७.२ डि.से. देखि २३.८ डि.से. सम्म हुन्छ तर पनि उचित तापक्रम १५.५देखि १८.३ डि.से. मानिएको छ ।
मल भएको मलिलो दोमट किसिमको माटो राम्रो मानिन्छ । पानीको निकास राम्रो सँग हुने र पानी राम्रो सँग अड्याउन सक्ने किसिमको माटो काउली खेतीका लागि राम्रो हुन्छ । माटोको अम्लीयपना भने ५.५ सम्म हुनु पर्दछ । बर्षाको मौसममा काउलीमा मूख्यत ओइलाउने, जराफेद तथा गाठो कुहीने, फूल कुहीने आदिले निकै सताउँदछ । अतः बेर्ना सार्नु अगाडी माटोलाई राम्रोसँग खनजोत गर्नु पर्दछ । यदि हलुका बलौटे किसिमको माटोमा यसको खेती गर्ने हो भने प्रशस्त मात्रामा कम्पोष्ट वा गोबर मलको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
काउली खेती गर्ने जग्गामा पानी निकासाको व्यवस्था धेरै राम्रो बनाउनु पर्दछ । धेरै चिसो र हिलो जग्गामा यसको खेती राम्रो हुदैनँ । माटोलाई ३ ४ पटक राम्रो संग खनी माटो बुरबुराउदो बनाउनु पर्दछ । पानीको निकासको लागि जमीन समथर छैन भने जमीन समथर बनाउनु पर्दछ ।
खेती गर्ने समयः
बेमौसमी खेती भन्नाले मौसम भन्दा अधि वा पछी भन्ने बुझिन्छ । काउलीको जात अनुसार बेर्ना सार्ने समय फरक हुन्छ.
प्रति रोपनी बीउ कति लाग्दछ भन्ने कुरा बीउको आकार प्रकार उमार शक्ति लगाउने समय, बीउको जात, आदीमा भर पर्दछ तापनि साधारणतया काउलीको हाईव्रिड जातहरू ८ देखि १० ग्राम प्रति रोपनी सम्म प्रयोग गरिन्छ । जति जती बर्षा भयो त्यति बीउ बढि प्रयोग गरेको पाईन्छ ।
बेर्ना सार्ने तरिका:
काउलीको जात अनुसार समय फरक हून्छ । अगौटे जातका काउलीका बेर्ना ३÷४ पाते भए पछि सार्न उपर्युक्त हुन्छ भने पछौटे जातका काउलीका बेर्नाहरू ५–६ पाते भए पछि सार्न लायक हुन्छन् । जग्गा खनजोत गरेपछि अन्तिममा ड्या बनाउनु पर्दछ । अगौटे जातका लागि ४५ से.मी.– ४५ से.मी. फरक पर्ने (२४६४ बेर्ना ) र मध्य मौसमी जातका लागि ४५से.मी.– ६० से.मी.को फरक पर्ने (१८५१ बेर्ना ) र पछौटे जातका लागि ६० से.मी.– ६० से.मी.को फरक पर्ने (१३७७ बेर्ना ) गरेर ड्याभ दुरी बनाउनु पर्दछ । साधारणतया १ रोपनी जमीनमा १८५१ बोट काउली अटाउँदछ । प्राय बैसाख देखि भदौ सम्म रोपिने बेमौसमी काउलीको जात अगौटे र मध्यखालको हुने भएकोले एक मीटरको चौडाईको ड्याबमा ५० से.मी. फरकमा २ लहरमा रोपिन्छ । यसरी लगाउँदा अगौटे जात २००० बेर्र्ना लाग्ने गर्दछ ।
काउलीलाई सिंचाई गर्दा धेरै कुरामा विचार पु¥याउनु पर्दछ । रोप्ने वित्तीकै सुख्खा छ भने हल्का पानी दिनु पर्दछ । गर्मी समयमा ७ दिन देखि १० दिनको फरकमा पानी दिनु पर्दछ । बर्षाको समयमा भने सिंचाईको सट्टामा पानीको ड्याभ कुलेसोमा पानी नजम्ने गरी केहि भिरालो बनाई दिनु पर्दछ । गोबरमल र हाईव्रिड काउली खेतीलाई साधारणतया अन्य जातहरूलाई भन्दा मलखाद बढिनै दिनु पर्दछ । कति मलखाद दिने भन्ने कुरा माटोको मलिलोपना, जात र याममा भर पर्दछ । २००० केजी गोबरमल र प्राभ पर्दछ । विरुवा रोप्ने खाल्टो खाल्टोमा मल दिन सके बेस हुन्छ । रासायनीक मलखाद साधारणतया प्रति रोपनी रासायनीक मलखाद कहीले कहिले कति कति दिने भन्ने कुरा तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
बेर्ना सारेको १५२० दिन पछि पहिलो र ४० दिन पछि राम्रो संग दोस्रो पटक गोडमेल गरी उकेरा दिनु पर्दछ । प्रत्येक विरुवामा यसै समयमा ४ – ५ ग्रामका दरले युरीयाले टप ड्रेसिn गर्नु पर्दछ ।
जात अनुसार काउलीको बाली लिने समय पनि फरक फरक हुन्छ । बेलाबेलामा मलखाद, भिटामिन, रोगनासक औषधि तथा प्राविधिकले भने अनुसार लगाईएको बेमौसमी काउली विरुवा रोपेको ४५ दिन देखि १५० दिनमा काट्न तयार हुन्छन (ट्रपिकल–४५ दिने, सिल्भर कप–४० दिने, सिल्भरकप–६० दिने, काठमाण्डाँै लोकल १५० दिने आदी ) । जात अनुसार फुलको आकार पनि सानो ठुलो हुने भएकाले उपर्युक्त अवस्था हेरी टिप्नु पर्दछ । काउलीको सेतो भाग अर्थात वरिपरी कलिलो पातले कोपीलाई बेर्नु छाडेपछि गुणस्तर नविग्रीदै काट्नपु र्दछ र नजिकको संकलन केन्द्र वा सोझै होलसेलमा लागि बेच्नु पर्दछ ।
उत्पादन के कति हुन्छ भन्ने कुरा माटोको उर्वरा शक्ति , उत्पादनशिल जातको छनोट, प्रविधिको प्रयोग , रोग किराको समस्या , बजारको समस्या, त्यस ठाउको हावापानी आदीमा भर पर्दछ तापनी साधारणतया हाईव्रिड जातहरूको उत्पादन ६०० देखि ९०० के.जी. प्रति रोपनी सम्म हुन्छ । स्नोक्राउन÷रेमी ८०० देखि १२०० केजि सम्म र लोकल जातहरूमा ज्यापु १५०० देखि १८०० केजि काठमाण्डाँै लोकल १५०० देखि २००० केजि सम्म प्रति रोपनि उत्पादन भएको पाइन्छ ।